MM Daily Life - Page 209 of 214 - News and Media
ဒါရိုက်တာ ၅ ယောက်ရဲ့ ရှုးဖိနပ်ကိုတိုက်ပေးရင် အလုပ်ခန့်မည်ဟု ပြောလိုက်သောအခါ…
ဒါရိုက်တာ ၅ ယောက်ရဲ့ ရှုးဖိနပ်ကိုတိုက်ပေးရင် အလုပ်ခန့်မည်ဟု ပြောလိုက်သောအခါ… တစ်ခါတုန်းကပေါ့…လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူဌေးကြီးဟာ သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကိုခံစားချင်လို့ YBS ကြီးကိုစီးပြီး ရုံးတက်ကြည့်ပါတယ်။ ကံကောင်းတော့ ထိုင်ခုံလေးတစ်ခုမှာထိုင်စီးရတာပေါ့…သူဌေးလည်း စီးရင်းနဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်ကိုလေ့လာလိုက်၊ ဘတ်စကားပေါ်က ကောင်မလေးတွေကို ငေးလိုက်နဲ့ ငြီးငွေ့လာတော့ မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး ခဏနားနေလိုက်တယ် …။ ရုတ်တရက် စူးရှသောအသံတစ်ခု နားထဲကိုတိုးဝင်လာပါတယ်။ ” ဒီမှာ ဦးလေးကြီး ခင်ဗျားကသန်သန်မာမာနဲ့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးထိုင်မနေပါနဲ့….ဒီက ဗိုက်ကြီးသည်ကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်လေ……” သူဌေးမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဗိုက်ကြီးသည်တစ်ယောက် ရပ်နေပြီး သူ့နောက်မှာတော့ ခုနက စွာကျယ်ကျယ်နဲ့စကားလှမ်းပြောနေတဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးတစ်ယောက်… ကြောင်ပြီးကြည့်နေတုန်းမှာပဲ ရုပ်ဆိုးမလေးက “ခင်ဗျားကိုပြောနေတာဗျ…ထပေးလိုက်လေ….ဒီအမကမပေါ့မပါးနဲ့…” ကားတစ်စီးလုံးက မျက်လုံးပေါင်းများစွာဟာသူဌေးကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ အထင်သေးတဲ့အကြည့်၊ ရှုတ်ချတဲ့အကြည့်နဲ့ပေါ့…။ သူဌေးလည်း ဘာမှဖြေရှင်းမနေနိုင်တော့ ရှက်ရှက်နဲ့အမြန်ထကာ နီးစပ်ရာမှတ်တိုင်မှာ ဆင်းပြေးပါတော့တယ် …။ … Read more
အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ရည်းစားမရှိရခြင်းအကြောင်းရင်း (၆) ချက်…
အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ရည်းစားမရှိရခြင်းအကြောင်းရင်း (၆) ချက်… တစ်ခါတလေ သိပ်လှတဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာ ရည်းစား မရှိတတ်ပါဘူး။ ဒါကို သူတို့ကိုယ်တိုင် အခြားသူတွေကို ရှင်းပြတဲ့အခါမှာ မဖြစ်နိုင်တာပဲ-ဆိုတဲ့ စကားကိုသာ ကြားရပါတယ်။ အမှန်တော့ သိပ်လှလွန်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရည်းစာ မရှိရခြင်းအကြောင်းအရင်း (၆) ချက် ရှိပါတယ်။ အခုဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ကောင်မလေးရော အဲ့လိုမျိုး အရမ်းလှနေလို့များ ရည်းစား မရတာလား? ယောက်ျားလေးတွေလည်း ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးက အရမ်းလှနေလို့လက်မလျော့လိုက်ပါနဲ့နော်။ အောက်မှာတော့ အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေးတွေ ဘာလို့ရည်းစားမရှိရတာလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ 1. ကောင်လေးတွေကို မယုံကြည်ခြင်း” သူတို့ကို ချဉ်းကပ်လာတဲ့ ကောင်လေးတွေကို သူတို့ အကြွင်းမဲ့ မယုံကြပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သူတို့လှလို့ လာကပ်တယ်လို့ပဲ ထင်နေတာကြတာပါ။ ကောင်လေးတွေကလည်း လှတဲ့ … Read more
ကလေးကို လှုပ်ယမ်းတဲ့အခါ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက် ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ?(Video ဖိုင်)
ကလေးကို လှုပ်ယမ်းတဲ့အခါ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက် ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ?(Video ဖိုင်) ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာဟာ တော်တော် အပင်ပန်းခံရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်တွေရဲ့ ငိုသံတွေကြားက မိမိကလေးငယ် ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ သိအောင်ကြိုးစားရတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် တော်တော်ပညာသားပါတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒါပေမဲ့ ကလေးငယ်ကို ထိန်းကျောင်းရင်း ကလေးငယ်က အငိုမတိတ်တဲ့အခါကလေးကို ကိုင်ဆောင့်မိချင်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခါယမ်းလိုက်ပစ်ချင်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံမှာ စက္ကန့် အနည်းငယ်ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီလို ဒေါသ စက္ကန့် အနည်းငယ်ထွက်မိလို့ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်မိရင် ကလေးငယ်မှာ ခံစားရမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို အင်္ဂလန်အမျိုးသား ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ NHS (National Health Service) နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မင်နီဆိုတာပြည်နယ် ရိုချက်စတာ မြို့ရှိ (Rochester) Mayo Clinic တို့ကဖော်ပြခဲ့ပြီး ကလေးငယ်လေးယောက်မှာ … Read more
မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ စိုးရိမ်စရာ ရာသီသွေးလက္ခဏာ…
မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ စိုးရိမ်စရာ ရာသီသွေးလက္ခဏာ… မိန်းကလေးရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့အသက်ကြီးလို့သွေးမဆုံးခင်အထိ လစဉ် သွေးဆင်းခြင်းကို ကြုံရမှာ ဓမ္မတာပါပဲ(ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်က လွဲရင်ပေါ့) …။ ဒီလိုပုံမှန်ရာသီသွေးဆင်းတာကမဆန်းပင်မဲ့တစ်ချို့တွေကတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိုးရိမ်စရာ ဓမ္မတာလာခြင်းတွေကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် …။ ဘယ်လိုအခြေနေတွေက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စိုးရိမ်စရာ ရာသီလာခြင်းတွေလည်းဆိုတာ ပျိုမေတို့ သိစေဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်နော် …။ (၁) ပုံမှန်မလာတဲ့ ရာသီသွေး” တစ်လတစ်ခါပုံမှန်လာရမယ်ဆိုတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ သင့်ရဲ့ ဓမ္မတာဟာ နှစ်လမှတစ်ခါလောက်လာတာမျိုး သုံးလတစ်ကြိမ်လောက်မှတစ်ခါဆင်းတာမျိုး၊ ပုံမှန်လတိုင်းလာနေပင်မဲ့လည်းတစ်ရက်တည်းနဲ့တင် ပြီးသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့သားအိမ်ကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့တော့လိုပါပြီ။ ချက်ချင်းကြီးစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိတဲ့အခြေနေမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့ သိပ်ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ပါဘူး …။ (၂) အရောင်ညိုမဲညစ်နေသော ရာသီသွေး” ရာသီသွေးဟာ ပုံမှန်သွေးအရောင်မျိုးမဟုတ်ပဲ ညိုညစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုရင်တော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရာသီသွေးမှာ ပန်းဆီရောင်(သို့) အနီရောင်ဘက်ကိုသွားနေမှသာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး …၊ … Read more
ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မေသန်းနု
ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မေသန်းနု ပရိသတ်ကြီးရေ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီမေသန်းနုကတော့ (၂၀၂၀)ခုနှစ် နှစ်စပိုင်းလောက်မှာ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုကြောင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူပါ။ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ စင်ယော်မောင်မောင်က မဆင့်အတွက် အမျိုးမျိုးကြိုးစား ကူညီပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း ရှောင်လွဲမရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကိုတော့ မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုရမှာပါနော် …။ ယခုနှစ် သင်္ကြန်နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာလည်း မဆင့်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့အတူ မဆင့်အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာစေဖို့ ဆုတောင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း ဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း မဆင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဆိုတဲ့ ကောလာဟလစကားတချို့ထွက်ပေါ်ခဲ့သေးပေမယ့် အမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး …။ ‘ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ စင်ယော်မောင်မောင်ကိုယ်တိုင်က မိသားစုဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူ မဆင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါပြီခင်ဗျ ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်စရာသတင်းစကားလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မဆင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ နေထိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်လေးက အခုဆို အသက်ဝင်လာတော့မှာမို့ ဝမ်းသာစရာပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီးရေ …။ ။ Source – … Read more
ထိုင်းချဲလ် (၃)လုံးထီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု (Live)
ထိုင်းချဲလ် (၃)လုံးထီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု (Live) အောက်ဆုံးတွင် တိုက်ရိုက်(Live)ကြည့်ရန် လောကီပညာကို လိုက်စားကြသော မြန်မာဆရာများ၌ တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာဆရာအချင်းချင်း ပညာကို ဖလှယ်သော အလေ့အထ ရှိတတ်ကြ၏ …။ ထိုသို့ တစ်ဦးအား ပေးအပ်ကာ လဲလှယ်ကြရာ၌ ရှေးဦးစွာ မိမိရှာဖွေတတ်သိထားသမျှ ပညာရပ်များတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် ကိုယ်တွေ့မှန်ကန်သော ပညာများကိုသာပေးပါမည်မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ၍ ပေးခဲ့မိလျှင် ယခုတတ်ထားသမျှပညာများလည်း ပျက်ကွက်၍ မဟာအ၀ီစိငရဲ၌ မကျွတ်တန်းခံရပါစေဟု ဆရာနှစ်ဦးစလုံး သစ္စာပြုပြီးမှကို ပညာဖလှယ်ကြလေ့ရှိပါတယ် …။ ခုဖော်ပြလိုက်သောနည်းမှာ ၁၂၉၄ခုနှစ်လောက်က ပဲခူးမြို့သို့ရောက်စဉ် ယုံကြည်လောက်သော ပယောဂဆရာတစ်ဦးနှင့် စာရေးသူတို့ ပညာချင်းဖလှယ်ကြရာမှ ရရှိခဲ့သောနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် …။ ဥုံ – ရှင်သီဝလိ ဘုန်းရှိမြတ်စွာ ရဟန္တာ ထိပ်မှာမြတ်ဖျား ကိုယ်တော်ထား နားမှာ ကိုယ်တော်ကျိန်း ခပ်သိမ်းလိုရာရကာယဝစီ … Read more
ကားသမားတဈဦးက သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီး ပေါကျခဲ့တာ ဖွဈကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ထီဆိုငျပိုငျရှငျ ဦးစိုးဝငျး
ယခု သတငျးကို ( MonywaGazette ) စာမကျြနှာမှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျ( ကိုအောငျကွီး မုံရှာ၊ဇူလိုငျ-၁ ) ယနထှေ့ကျရှိသော ၁၇ ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီ၏ အမွငျ့ဆုံး သိနျးတဈသောငျးခှဲဆု ကို စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ကနီမွို့နယျ ဝရာကြေးရှာရှိ ကားသမားတဈဦးဖွဈသူ ကိုသောငျးထိုကျလငျးမှ ဆှတျခူးရရှိခဲ့သညျ။ သိနျးတဈသောငျးခှဲပေါကျခဲ့သော ည-၈၅၃၀၉၅ ထီလကျမှတျအား မုံရှာမွို့ ဗိုလျခြုပျလမျး ရဲတိုကျတနျးရှိ အောငျဆုထူးပိုငျ ထီဆိုငျမှ ထိုးခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ထီဆိုငျရှငျ ကိုစိုးဝငျး ကပွောသညျ။ “ကြှနျတျောပေါကျတယျ ထငျကွတာ၊ ဆိုငျက ဝနျထမျးကောငျမလေးရဲ့အဈကိုပေါကျတာပါ။ ဒီကိုလာရငျး ထီထိုးနကွေပါ။ အခု သူက ခရီးလှနျနလေို့ လှမျးတော့ အကွောငျးကွားထားပါတယျ” ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။ မုံရှာမွို့အောငျဆုထူးပိုငျ ထီဆိုငျပိုငျရှငျ ကိုစိုးဝငျးသညျ … Read more
လူသိနည်းသော တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့၏ စိတ်နေစိတ်ထား လူသိနည်းသော တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ … တနင်္ဂနွေ သားသမီးများသည် စိတ်နှလုံးသားဖြူစင်၍ သဘောထား ပြည့်ဝသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတစ်ပါး အပေါ် ပေးကမ်း ကျွေးမွေးလိုစိတ် ရှိသည်။အိမ်မိသားစု၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများ အပေါ် အနစ်နာခံပြီး ပေါင်းသင်း တတ်သည်။ မိမိအပေါ် မကောင်းကြံ သူကိုတော့ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ ပြန်လည် လက်စားချေ တတ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ချစ်မိရင်လည်း နှစ်ယောက် မရှိ၊ မုန်းပြီဆိုလည်း ဘယ်လိုမှကို မျက်နှာ မကြည့်ချင် တော့လောက်အောင် မုန်းတီး တတ်ကြသည်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ စိတ်တို ၊စိတ်ကောက် ၊စိတ်ဆိုး လွယ်သည် …. ။ စိတ်ဆိုးပြီ ဆိုရင်လည်း ဘယ်သူဘဲ ချော့ချော့ … Read more
(17)ကြိမ်မှာ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင်မှာ (11)ကြိမ်တုန်းက သိန်းတစ်သောင်း…ပေါက်ခဲ့သူဟုဆို(အံ့ဖွယ်လူသား)
(17)ကြိမ်မှာ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင်မှာ (11)ကြိမ်တုန်းက သိန်းတစ်သောင်း…ပေါက်ခဲ့သူဟုဆို(အံ့ဖွယ်လူသား) (17)ကြိမ်မှာ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင်မှာ (11)ကြိမ်တုန်းက သိန်းတစ်သောင်း…ပေါက်ခဲ့သူဟုဆို(အံ့ဖွယ်လူသား)ပါ … ။ မြန်မာပြည်မှာ ထီနှစ်ခါပေါက်ဘူးသူ ကံထူးရှင်ပေါ်လာပြီး အောင်ဘာလေ (11)ကြိမ်မှာ သိန်းတစ်သောင်း… အခုလ (17)ကြိမ်မှာ သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် လူချင်းတူတယ်ကံချင်းမတူကြဘူးတဲ့…မုဒိတာပွားမိပါတယ်ကံတရားရယ် … ။. အခုပေါက်တဲ့ ထီဆိုင်က အောင်ဆုထူးပိုင် ၁၇ကြိမ် ကျပ်သိန်း၁၅၀၀၀ဆုကြီး ည ၈၅၃၀၉၅ ဦးစိုးဝင်း မုံရွာ အောင်ဆုထူးပိုင် မှဆွတ်ခူးသွားပါသည်။ Htun Hla Oo အရင်လည်း သိန်း၁၀၀၀၀ဆု ​ပေါက်ဖူးထားတယ်လို့ ကြားတယ် …. ​အောင်ဆုထူးပိုင်က ကိုစိုးဝင်း Maung Tun အရင်တစ်ခါသိန်းတစ်သောင်းက ကိုယ်တိုင်ပေါက်တာ . ခုက အရောင်းထဲကပေါက်တာ … ။ ခရစ်ဒစ် Unicode (17)ကွိမျမှာ … Read more